War Deg Deg ah : Hooyo Isbitaal Banaadir ku umushay 2caruur mataana ah oo ay maqanyihiin xubnaha ugu muhiimsan jidhka Bini Aadamka. | Salaan Media
War Deg Deg ah : Hooyo Isbitaal Banaadir ku umushay 2caruur mataana ah oo ay maqanyihiin xubnaha ugu muhiimsan jidhka Bini Aadamka.
Ilo wareedyo ku sugan Isbitaalka Banaadir ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in laba mataana ah oo aan laheyn Calool iyo madax toona ay hooya Soomaaliyeed ku dhashay in yar kahor Isbitaal Banaadir ee Magaalada Muqdisho.
Caruuntaan oo aan wali naloo sheegin gabdho iyo wiilal waxa ay yihiin ayaa waxaa la sheegay in ladareemayo in nafi ku jirto hasa yeeshee xubnaha ka maqan aawadeed ayaa laga cabsi qabaa in eesan sii noolaan karin.
“Caruur Mataana ah ayaa hada hooyo Soomaaliyeed ku dhashay Isbitaal banaadir. Calool iyo madax toona malahan, Luga iyo gacmo uun ayaa ka muuqda way nuux nuux sanayaan. Mucjiso inteeda la eg waaye”, Sida waxaa ku waramay mid kamid ah howl wadeeenada Isbitaallaka oo lahadlay Shabakadaan.
Mararka qaar ayey dhacda in caruur ay maqanyihiin xubna badan oo jirkood ah ay dhashaan iyada oo badankood ay geeriyoodaan marka ay ifka yimaadaan , waxa eyna qeyb katahay Mucjisooyinka Rabaaniga ah ee ka dhaca daafaha dunida.